Granit Xhaka Oo Ka Sheekeeyey Sidii Uu Tababare Unai Emery Uga Caawiyey Goolkii Gantaalka Ahaa Ee Uu Ka Dhaliyey Crystal Palace – Cadalool.com
Granit Xhaka Oo Ka Sheekeeyey Sidii Uu Tababare Unai Emery Uga Caawiyey Goolkii Gantaalka Ahaa Ee Uu Ka Dhaliyey Crystal Palace
October 31, 2018 Abdiwahab A. Abeye
Tababaraha kooxda kubadda Cagta Arsenal ayaa ku wargeliyey laacibka kooxdiisa ee Granit Xhaka inuu laagto kubbadaha xorta ah iyo koorneyaasha ka hor ciyaartii Crystal Palace ee barbar-dhaca ku dhamaatay.
Xhaka ayaa dhaliyey goolka labaad ee kooxdiisa oo ahaa mid aad u qurux badnaa, kaddib markii laag xor ah uu sida gantaalka ugu toogtay goolka Crytal Palace ee uu waardiyaha ka ahaa Wayne Hennessey, hase yeeshee rikoodhe xilli dambe la siiyey Palace ayaa ciyaarta ku dhameeyey 2-2.
Xhaka ayaa markii uu goolka dhaliyey waxa uu u orday dhinaca tababare Emery oo uu ku dhegay, ugu dambayna waxa uu ka sheekeeyey sidii ay u dhacday inuu goolkaas dhaliyo oo uu tilmaamay in qayb weyn uu ku lahaa tababare Emery.
Waqtigii nasashada ayaa uu tababare Emery u sheegay Xhaka inuu qaato laagga xorta ah ee ay kooxdu hesho iyo koorneyaasha, waxaana goolkiisu ku yimid isku-daygii labaad.
“Waxa aan doortay inaan goolka toogto, sababtoo ah, tababaraha ayaa i weydiiyey sabbabta aanan u qaadanin koorneyaasha iyo laagga xorta ah qaybtii hore. Kaddib wuxuu ii sheegay inay khasab tahay in aan laagga xorta ah iyo koornaha laagto, aniguna sidii ayaan yeelay. Waxa uu ahaa isku-daygii labaad ee qaybta labaad, waanan u faraxsanahay inaan dhaliyey laakiin kuma farxi karayo natiijada ciyaarta.” Sidaas yidhi Xhaka oo u warramay website-ka kooxda Arsenal.
Xhaka ayaa ciyaartaas lagu qasbay inuu ka ciyaaro difaaca bidix maadaama ay Nacho Monreal iyo Saed Kolasinac dhaawac ku maqnaayeen, waxaanay taasi keentay inuu khalad ku galo Wilfried Zaha oo rikoodhe lagu dhigay.